Nangona kungenye yezindlela ezilungileyo kunye nezifundo, kufuneka ucinge ngokungeza ii-cookies kwisayithi yakho ukukhusela nayiphi na ingxaki. Ngale ndlela, kufuneka ugcine idilesi ye-IP eyahlukileyo ukuze i-Google Analytics ikwazi ukwahlula kwii-IP ezingaqinisekiyo. Kubalulekile ukusebenzisana nazo zonke iintlobo zeipheqululwazi kunye nokusebenzisa iithalesi ze-IP ezinamandla kuphela, kubandakanywa iipilisi, iiptotops kunye namadivayisi eselula. Ngelo xesha, akufanele ulibale ukuba le ndlela ayibizi kangako njengoko kufuneka ubeke i cookies yokukhuphela kwiwebhusayithi yakho usebenzisa iziphequluli ezahlukeneyo kunye nezixhobo ezahlukeneyo. Oku kunokukhokelela ukuba uchithe imali eninzi xa uqesha umntu ngomsebenzi. I-Google Analytics ayizange ivivinye ukuthembeka kwale ndlela. Nangona kunjalo, inani elikhulu labantu lisayisebenzisa kwaye linika ithuba eliphezulu. Unokunciphisa zonke iingxaki ezinxulumene ne-Google Analytics yakho ngale ndlela, kwaye kulula ukwenza okanye ukususa izihlungi uze ulungise iikhowudi ze-HTML. Le ndlela ifanelekileyo kuphela kubantu kunye nemibutho emincinci.